Chekutanga masheya ePeoplePod muUnited States akatengesa kunze | Ndinobva mac
Chekutanga masheya ePeoplePod akatengeswa kunze muUnited States
Mangwana ekutanga HomePods anotanga kusvika kune vatengi vakachengetera chimwe chezvigadzirwa izvi pazuva rekutanga, Kukadzi 9, chete muUnited States, United Kingdom neAustralia. Zvakadaro, hazvichakwanise kuisa odha (kuburikidza newebhusaiti yepamutemo yeApple) yezuva rekutanga rekusununguka. Pane kupokana, iyo nyowani yekuendesa zuva yakamisikidzwa kuna Kukadzi 12-13.
Naizvozvo, Isu tinonzwisisa kuti kudiwa kwechigadzirwa chitsva che brand chave zvakadaro iyo parizvino yatengeswa kunze, kupfuura zvese zvinotarisirwa zveNorth American brand.
Kupa kwePodPod mune dzimwe nyika dzekutanga, senge United Kingdom neAustralia, kwave kudiwa zvakanyanya, uye ndakanonoka kuendesa mazuva ekuendesa nekuda kwayo.
Iko kugoverwa kwePambaPods mune dzakasiyana nyika kwave kuchiitwa nguva zhinji uye zvakawandisa, uye Vatengi vazhinji vanogashira iyo yakamirirwa kwenguva refu HomePod mangwana. Nekudaro, mune dzinenge nyika dzese dzakaburitswa, iro razvino zuva rekuburitsa rakashandurwa uye rikamisirwa svondo rinouya.
Vatengesi vashoma chete ndivo vachiri kupa iyo yakamirirwa-refu chishandiso kune yekutanga US kuvhura zuva. Zvakanakisisa-TengaSemuenzaniso, iwe unoona kuti iwe uchiri kugona kupa mamwe mauniti ekuendesa mangwana. Mamiriro akafanana evamwe vatengesi muUK.
Uyewo, Apple iri kuyedza kushongedza zvitoro zvayo zvepanyama zvine zvikamu zvakakwana kuitira kuti vatengi vakwanise kuenda chaiko kuchitoro uye vagowana chishandiso chitsva kubva kuvakomana kubva kuCupertino.
Shipments kuburikidza neApple webhusaiti yepamutemo kune avo vakatora mukana wekutora imwe yezvigadzirwa zvekutanga pamusika Vanozvigamuchira mangwana kuburikidza neUPS kuburikidza nekutumira kudhirivhari. Kune vamwe vedu, isu tichafanirwa kumirira kwechinguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Chekutanga masheya ePeoplePod akatengeswa kunze muUnited States
Showrunner Brian Fuller, anoregedza kugadzirwa kweAnoshamisa Tales nekuda kwekusiyana kwekugadzira
Isu tatova neshanduro 49 yeSafari Technology Preview browser